सुजाताको आफ्नै छोराले आमाको ह ‘त्या बारे दिए ड रला ग्दो बयान : ……त्यसपछि आमालाई काठको गोलिया बनाउने मसिनमा लागे – Ramailo Sandesh
महोत्तरी : जेठ २० गतेदेखि महोत्तरीको सुजिता ठाकुर बेपत्ता थिइन्। गत आइतबार मात्रै महोत्तरीको भ्रमरपुरामा एक महिलाको शव भेटियो।
त्यो शव सुजिताकै हो भनेर स्थानीयले भनिरहेका छन्। प्रहरीले भने औपचारिक रुपमा त्यो शव सुजिताकै हो भनेर प्रमाणित गरेको छैन।
शव भने खेतमा गा डि ए को अवस्थामा भेटि एको थियो। महोत्तरी भ्रमरपुराकी सुजिता ठाकुर जेठ २० गतेदेखि बे प त्ता थिइन्।
श्रीमान परिवारले सुजिता अर्कैसँग भा गे को दाबी गर्र्दै आएका थिए तर, माइती पक्षले सुजिताको ह त्या परिवारले गरेर ला स गा य ब पारेको आ रो प लगाउँदै आएका थिए।
सुजिताका बुवा कामेश्वर पाण्डेले छोरी बेप त्ता भएको र ह त्या आ शं का गर्दै खोजीका लागि उ जु री दिन जाँदा प्रहरीले पनि दर्ता गर्न मानेका थिएन।
प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि सुजिताका बुवाले महिला से लमा निवेदन दिए। निवेदन दर्ता भए पनि प्रहरीले खा सै चासो देखाएन। र अ नु स न्धान प्रक्रियासमेत अघि बढाएन।
कतैबाट पनि सहयोग नभएपछि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी रहेको सुजिताका भाइ जितेन्द्र पाण्डेले सामाजिक सन्जालमार्फत घ ट नाका बारेमा लेखे।
उनले आफ्नी दिदीलाई उनकै घर(श्रीमानका परिवार)ले ह त्या गरेर खेतमा गा डे को भनेर लेखे। उनको त्यो भनाइलाई लिएर सामाजिक अभियन्ता सरोज रायले त्यसबारेमा चासो लिए।
त्यसपछि अरु धेरै अधिकारकर्मीहरूले घ ट नाको छा नबि न गर्न प्रहरीलाई द बा ब दिन थाले। रुपान्तरणले प्राप्त गरेको एउटा भिडियोमा सुजिताका पाँच वर्षीय छोराले घ ट नाको थप खु ला सा गरेका छन्।
४ मिनेट ४८ सेकेन्डको त्यो भिडियोमा उनले आफ्नी आमा (सुजिता)को ह त्या हजुरबुवा, बुवा र काकाले गरेको भनेका छन्।
त्यसबारे उनले सुजिताकी आमा(माइतीतिरकी हजुरआमा)सँग कुराकानी गरेका छन्। मैथिली भाषामा सुजिताकी आमाले आफ्ना नातीसँग गरेको कुराकानीलाई सम्पादन गरेको छ– सुजिताकी आमा: बावु कसरी गरियो तिम्रो आमाको ह त्या? सुजिताका छोराः छेपारो भ गा उने चि र्पट लिएर काकाले आमालाई पि ट्नु भयो। र आमाको आँखामा चो ट लागेको थियो, आमा रुदैँ हुनुहुन्थ्यो,
आमाको आँखा फु ले र (सु न्नि एर) ठूलो भएको थियो। पछि हजुरबुवाले आमालाई टे पले बाँ धे र, च क्कुले हा ने। त्यसपछि आमालाई काठको गो लि या बनाउने मसिनमा आमाको घाँ टी काँ टि यो… आमाः तिमीले मसिनमा का ट्दै गरेको देख्यौ? छोरा: देखेँ, मम्मी सुरुमा रु दैँ हुनुहुन्थयो पछि, बोल्नसक्नु भएन।
आमाः अँह तिमी झु टो बोल्दैछौ? छोरा: (चि च्या उँ दै) नाइँ म झु टो बोलिरा’को छैन… आमाः अनि मम्मीलाई का टेपछि के गरे तिम्रो अंकल र हजुरबुवाले?
छोरा: मेरो अंकल र हजुरबुवाले टे पले मम्मीलाई बाँ धे र…आमाः अरु को–को थियो? छोरा: सबैजना थियो…. आमाः सबै जना को–को? छोरा: घरको सबै जना… आमाः बावु त्यसपछि के भयो? छाेरा: मम्मीलाई फ्रि जमा राखे, अनि हजुरबुवाले मलाई जा भन्नुभयो…आमाः फ्रि जमा राखे?
केन्द्रिय कमिटिको बैठक सुरु नहुँदै आफ्नो पुत्ला जलाएको ओलिको जिकिर: बालुवाटारमा हंगामा
देख्ने बित्तिकै साक्षत अनौठो नाग देवता को दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस